DHAGEYSO:-Alshabaab oo Lacago Baad ku soo rogay Ganacsatada Magaalada Muqdisho | afrikada news online
Jul 14, 2017 - 1 Jawaab
Mid ka mid ah ganacsatada oo ay VOA la hadashay, islamarkaana codsaday inaan magaciisa la sheegin, ayaa sheegay in ganacsatada loogu yeeray degaannada Awdheegle iyo Bariire ee Gobolka Shabellada Hoose, halkaasi oo loogu hanjabay inay bixiyaan lacagaha.
Ganacsade kale oo ay VOA la hadashay ayaa xaqiijiyey in Al-Shabab ay ka ururiyeen ganacatsada ay ugu yar tahay 100 dollar ayna gaadhsiinsan tahay kumaannaan.
Haddaba Haaruun Macruuf ayaa hanjabadaaha ay helayana ganacsatada iyo lacagaha la sheegay in laga ururinayo ka waraystay Taliyaha Booliiska Gobolka Banaadir Jeneraal Axmed Xasan Maalin.
Ma aha wax cusub in ay sharwadayaal Shabaab shacabka xamar ka qaataan lacago baada oo aad u badan.Waa wax horay u soo jirey oo la ogaa.Madaxda iyo Odayaasha beesha hawiye ayagaa la soo marsiin waayey in xamar laga hirgaliyo dawlad shacabkooda u waardiyeysa.Ayagaa diiday oo ka dhaartay in xamar dawlad laga dhiso.
Shabaabna waxay ka faa’iidaysteen diidmada madaxda beesha Hawiye.Lama yaqaan markay odayaasha iyo madaxda beeshu garan doonaan danahooda dhabtaa iyo meeshay dantu ugu jirto.Haddii aysan Shabaab gacan iyo kaalmo joogto ah ka helayn beesha hawiye sooma ay gaareen wakhtigaan.